Fatahaada webiga Jubba oo maanta saamayn adag ku reebtay beeralayda qudaarta ee degmada Luuq – Radio Daljir
Fatahaada webiga Jubba oo maanta saamayn adag ku reebtay beeralayda qudaarta ee degmada Luuq
Nofeembar 30, 2013 1:38 b 0
Luuq, November 30,? 2013 – Webiga wayn ee Jubba ayaa maanta waxaa uu sameeyey fatahaad khasaare hantiyeed gaystay, fatahaada ayaa ka dhacday degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Beerlayda degmada Luuq ayaa sheegay in fatahaadu ay saamayn daran ku reebtay beeralayda degmada, qaar ka mid ah dadka hantida waayey ayaa sheegay in xilligan ay tahay wakhtigii ay qudaartu soo go?i jirtay.
Biyaha fatahaada ayaa jiiray inta badan beero bislaaday. Gaar ahaan beeraha basasha ayaa inta badan biyuhu la tageen, waxaa jira dagalyo kale oo aan iyana la carabbaabin.
Fatahaada ayaa sidoo kale sababtay in ay biyuhu la tagaan ilaa shan matoor oo waa wayn oo ah kuwa beerlaydu isticmaali jireen, khatarta biyaha fatahaada webiga Jubba weli lama ogga inta ay le?eg tahay iyo in ay sii kordhi karto.
Booliska federaalka oo Muqdisho ku qabtay gaadiid laga dhacay kayd shidaal oo ku gubtay KM4
Musharax Shire Xaaji faarax oo ku baaqay in la qaboojiyo xiisadda dagaal ee gobolka Sool (Dhegeyso)